Ebe a na -eri nri n'èzí - IntoKildare
Nri oriri n’èzí
Site n'ubi ndị dị n'èzí ruo n'ụlọ nri dị n'akụkụ mmiri, na -anụ ụtọ ihe ọkụkụ mpaghara na nri dị ụtọ ka ị na -eri nri al fresco n'ime ọmarịcha obodo Kildare, ihe agaghị ahụ n'anya!
Ọ bụghị mgbe niile ka anwụ ga -adịrị gị, mana ekwela ka nke a hapụ gị n'ihi na a ga -anabata gị nke ọma na ebe obibi mgbe ị ka nọ na gburugburu okike n'otu n'ime ọtụtụ ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ pubụ andụ na ebe obibi mmanya nwere oche dị n'èzí.
Firecastle bụ ebe a na-ere nri, ebe a na-eme achịcha, ebe a na-eme achịcha na ebe a na-eri nri yana ụlọ iri nri nke ndị ọbịa.
Ịzụ ahịaCafesIme ụlọ naanị
Ogwe dị ndụ n'etiti Newbridge na nnọkọ egwu dị ndụ na mmemme egwuregwu niile na nnukwu ihuenyo.
Wetuo obi ma zuru ike na Ogige Ogige dị na Barberstown Castle. Nwee anụrị ụfọdụ mmanya mmanya na-atọ ụtọ ka ị na-elegharị anya n'ubi sara mbara na osisi willow Weeping ama ama. The Garden Bar bụ […]
Ụlọ nri Mill & Terrace
Nri ndị Irish a ma ama sitere na Sean Smith dị n’ime ime obodo Kildare.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Terrace
Maka ezigbo ahụmịhe iri nri ga-echefu echefu, The Terrace na Killashee Hotel bụ naanị ebe ahụ. Ụlọ iri nri na-egbukepụ egbukepụ ma saa mbara ma na-ele ogige Fountain mara mma anya. Ihe […]